Nagu saabsan - Gaobeidian PRISES Biotechnology Co., Ltd.
PRISES Bayotechnoolajiyadu waa soo saare ku saleysan R&D, oo ku hawlan horumarinta, soo saarista iyo ka ganacsiga vitro Diagnostic Reagents (IVD) iyo Qalabka Caafimaadka, kaas oo loo oggolaaday soosaarka iyo ka ganacsiga alaabada IVD ee ka timid NMPA (CFDA) kuna shaqeeya nidaamka tayada leh ee ISO 13485, badankood alaabooyinka waxaa lagu caddeeyay calaamadda CE.
Warshaddeena waxaa la aas aasay sanadkii 2012 waxayna ku taalaa Gaobeidian City, oo u dhow Xiongan New Area iyo Beijing. Waxay ka kooban tahay aag 3,000 mitir murabac ah, oo ay ku jiraan fasalka 1000,000 aqoon-isweydaarsi nadiif ah oo leh 700 oo mitir murabac ah, fasalka 10 kun oo qolka baaritaanka microbiological oo leh 200 mitir murabac, qolal si fiican u qalabaysan oo tayo sare leh, shaybaarrada cilmi-baarista iyo horumarka, iwm.
PRISES Bayoolajiyadawaxay soosaaraysaa kaadida xasaasiga ah ee taranka, sida baaritaanka uurka, ugxanta ugxanta ama tijaabooyinka FSH ee loogu talagalay isticmaalka xirfadleyda iyo is-baaritaanka hoosta magaca magaca 'Golden Time', iyo sidoo kale aasaaska OEM / ODM. Waxay sidoo kale bixineysaa noocyo kala duwan oo Immunochromatography ah oo ku saleysan hal talaabo oo dhakhso ah oo loogu talagalay cudurada faafa & cudurada neefsashada ee HBsAg, Anti-HBs, HCV, HIV 1/2, Syphilis, Malaria Pf / Pv, Dengue IgG / IgM, Dengue NS1, H.Pylori, baaritaanka 'Covid-19 Antigen', baaritaanka 'Covid-19 Antibody', baaritaanka 'Covid-19 Neutralizing Antibody test', iyo tijaabooyinka kale ee degdegga ah ee gaarka ah, maaskaro, Tube Muunad Tuurista La Tuuri Karo, cinjirka galmada, iwm.
Wax soo saarkayagu sifiican baa loogu iibiyaa suuqa Shiinaha, sidoo kale waxaa loo dhoofiyaa macaamiisha wadamada sida Poland, United Kingdom, Germany, Portugal, France, Bulgaria, Turkey, Ireland, Egypt, South Africa, Madagascar, South Korea, Peru iwm Adhering mabda'a ganacsiga ee faa'iidooyinka wadajirka ah, waxaan ku yeelanay sumcad la isku halleyn karo macaamiisheenna sababtoo ah adeegyadeena xirfadeed, alaab tayo leh iyo qiimaha tartanka. Waxaan ku faraxsanahay inaan kula shaqeyno guusha guud isla markaana aan kuu keeno waxyaabaha aad ku qanacday.
WAQTIGA DAHABKA - Nooca caanka ah ee adduunka lagu yaqaan 'in-vitro reagent reagent'.
10 sano oo si isdaba joog ah u kobcineysa khibrada warshadaha wax soo saarka ogaanshaha in-vitro.